China Transparent / Silver Laser Holographic Film Bags / fanomezana fonosana Suit mpanamboatra sy mpamatsy | Taorian'ny-pirinty
Xiamen Rehefa vita pirinty Finishing Supply Co., Ltd.
Sarimihetsika fanadiovana maharitra
Sarimihetsika Polyolefin Shrink
Taratasy fanitsiana mangatsiaka
Sarimihetsika Matte Lamination
Sarimihetsika vita amin'ny gloss
Sarimihetsika malemy mikasika ny lamination
Horonan-tsary manohitra fanoherana
Sarimihetsika polyester vita amin'ny metaly
Sarimihetsika Laser Holographic
Sarimihetsika fonosana azo ovaina
Mamirapiratra / Matte BOPP Scratch Resistant Film 180mm ...
BOPP Soft Touch Lamination Film Ho an'ny fanontana / Packa ...
Sarimihetsika plastika vita amin'ny metaly vita amin'ny volamena
BOPP Gloss Laminating Film Ho an'ny Laminating mafana 15 Mic ...
Matte Lamination Film / BOPP Thermal / Dry Lamination Fi ...
Kitapo horonantsary mangarahara / Silver Laser Holographic / G ...
Kitapo horonantsary mangarahara / volafotsy Laser Holographic / Akanjo famonosana fanomezana
Fepetra fandoavana sy fandefasana:
Carton sy Pallet
450Tons / volana
Famaritana amin'ny antsipiriany momba ny vokatra
Manomboka amin'ny 18micron ka hatramin'ny 50micron
Samy niatrika ny 42dynes ny roa tonta
Bokikely / Photo / Lamination an'ny taratasy
sarimihetsika holographic bopp
sarimihetsika lamination holographic
Film horonantsary laser mangarahara / volafotsy / volamena ho an'ny kitapo / fanomezana
Misy karazany 2 ny sarimihetsika lamination mangarahara hologramika mangarahara ny iray dia sarimihetsika mangatsiaka mangarahara mangarahara (tsy misy lakaoly) ny iray hafa dia sarimihetsika fandefasana hologramika mangarahara mangarahara (miaraka amin'ny lakaoly EVA).
Ny sarimihetsika mangatsiaka hologramika mangarahara sy mangatsiaka dia mahatonga ny fonosana hiavaka sy hajaina…
Hatreto dia misy maherin'ny 180 ny lamina ary azo zahana ny lamina namboarina.
Fisehoana: loko metaly volafotsy mangarahara.
Loko: misy amin'ny Panton
Ny sarimihetsika holographic laser matetika dia manana ny famaranana ny volafotsy mangarahara sy ny volamena.
Inona ny sarimihetsika Laser Holographic?
Ny sarimihetsika holographic laser dia mampiasa teknolojia hologram handrafetana sarimihetsika miaraka amina fotoana miparitaka mandritra ny fotoana ampy hanovana ny halavan'ny valin'ny hazavan'ny hologram.
Laser HolographicFilm dia manolotra ny sary mazava aza ny fametahana loko miloko marevaka sy vokany sns.
Ampiasaina amin'ny plastika-plastika lamination na lamination vita amin'ny plastika toy ny sakafo fonosana sigara
marika labozia fanomezana fanomezana ara-barotra Christimas garland ary sehatra hafa amin'ny fanontana sy fonosana
kitapo fiarovana elektronika fipoahana porofo mipoaka amin'ny haingon-trano fananganana varavarankely fiara sns.
Araka ny fitaovana fototra dia sokajiana ho PET BOPP PVC sy PA;
Araka ny fiasa dia azo sokajiana ho horonantsary fonosana sarimihetsika feno fonosana maro loko koa izy
matte fonosana mavomavo fonosana azo fehezina sarimihetsika holographic fonosana filmhologram horonantsary misy loaka ary koa marika holographic anti-fack.
Ny horonan-tsarimihetsika holographic Thermal Laminating dia mitazona lamina mihoatra ny 180.
Ny lamina miorina amin'ny mangarahara sy metaly, dia mitazona volafotsy na loko maro loko ity farany izay midika fa misy lamina manokana azo vokarina miorina amin'ny loko isan-karazany. ny lamina avy amin'ny tsipika famokarantsika tsy mba mihena ary tsara ampiharina amin'ny lamination sy fonosana.
manome famirapiratana sy hamirapiratra vokany hanatsarana ny hakantony amin'ny substrates isan-karazany.
Torohevitra: sarimihetsika holografika na hatsiaka (tsy misy lakaoly) na sarimihetsika mafana (miaraka amin'ny lakaoly EVA) misy
Fitaovana: BOPP na PET Film + EVA
Hateviny: 20micron hatramin'ny 26micron
Roll sakan'ny: 200mm ka hatramin'ny 1480mm
Halavan'ny horonana: 2000m ka hatramin'ny 4000m
Sarimihetsika manatsara Base Film BOPP PET
18 micron 18 micron Micron 12 Micron 15
EVA Micron 6 Micron 8 Micron 12 10 micron
TOTAL Micron 24 26 micron Micron 24 25 micron
Manomeza làlana 45192 sqm / MT 41653 sqm / MT 35613 sqm / MT 32895 sqm / MT
0.0221 kg / sqm 0,024 kgs / sqm 0,0281 kg / sqm 0,0304 kg / sqm
misy hateviny manomboka amin'ny 20 micron ka hatramin'ny 38 micron namboarina ho matevina namboarina
Sakany (MG) 200mm ka hatramin'ny 1200mm
Length (m) 2000m ka hatramin'ny 4000m
fandeferana +/- 1 um
Paper Core 76mm (3 inch) 50.8mm (2 inch) 25.4mm (1 inch)
Fitsaboana Corena lafiny tokana na avo roa heny mihoatra ny 40 dinia
Temperature mitambatra 85ºC-110ºC (185ºF-230ºF) 90ºC-150ºC (194ºF-302ºF)
Fanerena fitambarana 10-18mpa
Hafainganam-pandeha 10-60m / min
Aiza no ampiasaina ny horonan-tsary momba ny laminationHolographic?
Clear Holographic Thermal Laminating Film dia manana fampiharana marobe ao anatin'izany:
Boky afisy fampisehoana fampirimana labozia Fividianana kitapo POP Signs Document Book Covers ID Cards Lisitra Antigraffiti Boardmaking manoratra / mamafa ny Calendars Photographs Albums sns
Fonosana ivelany ho an'ny fonosana fonosana na kitapo ho an'ny zava-pisotro misy alikaola tarehy kosmetika sns.
Sarin-taratasy taratasy fanaovana dokambarotra fanaovana pirinty nomerika sns.
Raha mila fanazavana fanampiny dia mifandraisa aminay, azafady.
Previous: Sarimihetsika fandefasana horonantsary mikraoba 26, famonosana horonantsary mangatsiaka mangatsiaka Premium
Manaraka: Biodegradable Plastika Mulch Film Anti Scratch Matte Finish Roll Lamination PLA Film
Modely samihafa amin'ny horonantsary laser hologramika mihoatra ny 42 ...
Holographic Metalized BOPP Film, BOPP Transpar ...
Laser Holographic BOPP Thermal Film
Sarimihetsika BOPP vita amin'ny metaly vita amin'ny polyester, lamination / P ...
Holographic Thermal Lamination Film Laser Holog ...
Film Thermal Laser Holographic Laser Thermal 20 Micro ...
Fizarana 2601 No. 13 Jinzhong Road, Distrikan'i Huli, Xiamen, Sina
sarimihetsika lamination hafanana, mpanamboatra sarimihetsika bopp metallized, Stamp mafana, sarimihetsika polyester, Fametahana foil mafana, Hot Foil,
sarimihetsika lamination mafana, sarimihetsika lamination bopp, horonan-tsarimihetsika laminating, horonantsary mikasika malefaka, horonantsary mahatohitra, foil manosotra mafana, foil fanosehana mangatsiaka, horonantsary mampihena ny sarimihetsika, sarimihetsika lamination paosy
Hizaha kaody QR hanampiana anay amin'ny WhatsApp